ChiGerman, Germany Iyo kambani ini yandinoshandira iri kutsvaga vashandi. - CHIJERIMANI
Shamwari yangu iri kutsvaga vashandi.
« : Kubvumbi 27, 2016, 04:32:45 pm »
Kana iwe uchigara muSulzbach-Rosenberg kana nharaunda dzayo, rubatsiro runopihwa kushamwari dzinoda.
Ruzivo nezve iro basa:
Kana iwe ukatanga naLeihfirma, kana iyo kambani ikasakusimudza iwe zvakananga, chikonzero ndechekuti vatsva vanosiya basa mangwana acho. Usafunge kuti havachaiwana, vanowanzoiwana mukati memwedzi mipfumbamwe, vachangobva kugamuchira vanhu vatatu, ndinotarisira kuti ive 9 pamwedzi wechishanu.
Kufunga kwebasa rako kupatsanura zvikamu zvemota (spark plug-lining, nezvimwewo) mune iyo kesi kubva kune yakapfava tepi, zvinoenderana nenhamba yemutengi. Iko hakuna kungovepo kwezviitiko zvishoma, dzimwe nguva mazana zana nemazana maviri ezviitiko, dzimwe nguva mazana mashanu kusvika mazana matanhatu ematare
Pakutanga, kana muhoro wako weawa uri 9 Maeuro, kana kambani ikakutora, inotanga kubva pa12 uye yotanga kuwedzera zvinoenderana negore, hongu, kune maprimiyamu.
Iwe unongoda kutaura chiGerman chidiki. Chinonyanya kukosha ndechekuti rekodhi rako rematsotsi rakachena.
Shamwari dziri kutsvaga basa asi dzisingawani, vanogona kufunga.